Adeegyada Kale Bixiso – "Eximio" Accounting Expert
xal Full aad Business
Adeegyada Kale BixisoOdenir Campos2019-02-01T14:12:18+00:00
Adeegyada Kale Related
Bixinta Accounts Doorashooyinka
Waxaan karnaa adeegyada xisaabtan taliyayaashii, senators, wafdi gobolka iyo federaalka, Maayarrada, xisaabaadka ololaha doorashada iyo golaha magaalada ee. Waxa intaa dheer in xisbiyada siyaasadda iyo guddi dhaqaale, in sano doorashada aanu bixino adeegyada soo socda: Qoondaynta iyo xisaabaadka xisaabaadka sida Maxkamada Sare ee Doorashooyinka – Tse barnaamijka SPCE ah. Consulting, orientation, gacanta iyo isticmaalka wax ku ool ah oo codsiyada bixinta sharci la xidhiidha ururinta iyo bixiyo kharashka khayraadka ee la xisaabtanka ee nidaamka doorashooyinka; Naqdaan waajibaadka siyaada; Imaanshaha in nidaamka dadaalkaas ku saabsan isla xisaabtanka ee xisaabaadka codsaday by Tse ah; Tababarka ku saabsan nidaamyada iyo faahfaahinta kharashyada khayraadka loo isticmaalo by kooxda xilli warbixinta, musharaxa ama xisbiga la helitaanka a QALABKA waxbarasho dalwaddii wax didactic oo lagu daydo oo dokumentiyo badan.
kaashatada & milkiilayaasha Ururada
waaxda Exclusive for-kaashatada la deggan yahay, ganacsi ama isku qasan, iyadoo qalabka saxda ah si loo siiyo baahiyaha Dareenkaaga oo dhan: Xisaabaadka iyo xisaabinta iyadoo la raacayo xeerarka canshuurta degaanka iyo mabaadiida xisaabinta, sifowdaa ina warar sax ah, xaashiyo dheelitirka iyo statements; Talo iyo ku sifowdaa ina: shir gudaha iyo xeerarka, ogeysiisyada ee ah shir of kiniisadaha, daqiiqo of kiniisadaha iyo diiwaanka sharci ay ka soo jeedaan; Jiritaanka iyo isuduwidda shirarka guud, at codsiga of assignee ah; Diyaarinta iyo soo diraya ajuurada kondho bil kasta; Publication iyada oo la xidhiidha ammaan ah in our website, xubin kasta oo kondho heli kartaa helitaanka helaan shaqsi ay sheegayaan wararka oo dhan oo ay ku jiraan (qoraalada bangiga) iyadoo lagu daro sharciga ah ay ka soo jeedaan (xiisaha) marka dhacay.
Waan ku faraxsanahay in uu ku dhawaaqo 2ks Agencia Digital sidii iskaashi cusub nala. Muuqaalkii u horeeyay ayaa weli ah, taasi waa sababta aan personalizing adeegyadayada Digital in ay gaaraan macaamiisha ka badan agagaarka adduunka. Waxaan mahad 2ks Agencia Digital sababta oo ah horumar ah ee our marketing digital.
Hel tashi bilaash ah
Waxaan aad ka jawaabi karin su'aal kasta oo ku saabsan
Consultation Free! Ka hor inta uusan go'aan kasta oo la Jirkiinna waa in aad talo ah ee ku takhasusay aagga Financial Accounting iyo ka. Sababtan awgeed, waxaan jeclaan lahaa in ay ku caawiyaan!
HELI TALO A FREE!